စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | Calzado, ပုံ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိခြေအိတ်များကိုအရေးမကြီးသောအ ၀ တ်အထည်တစ်ခုဟုယူဆခဲ့သော်လည်းအမှန်မှာဖက်ရှင်လောကတွင်အထူးသဖြင့်သူတို့သည်ယောက်ျားများအကြောင်းပြောလျှင်အမှန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဘာလဲဆိုတာကိုငါတို့ပြောပြမယ် အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်များ ယောက်ျားခြေအိတ်မ ၀ ယ်ခင်သင်ကြည့်သင့်သည်။
အမျိုးသားများသည်ယခင်ကအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ခြေအိတ်ကိုအမြဲ ၀ တ်ဆင်လေ့ရှိသော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိသည် အရောင်များ၊ ဒီဇိုင်းများနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးမရ။ သင်စတိုင်လည်စည်းသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီကို ၀ တ်နိုင်လျှင်ခြေအိတ်မပါလျှင်အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
ဒီ feature မှာငါတို့ကမင်းကိုဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်ရွေးချယ်စရာအချို့ကိုပြသပေးနိုင်တာကြောင့်အများကြီးအကြံပေးလို့မရဘူး။ ဒါဟာအရသာကိစ္စပဲ.
အရောင်အသွေးစုံသောခြေအိတ်များ၊ ပုံများ၊ စာပိုဒ်များ (သို့) ဓာတ်ပုံများပါ ၀ င်မှုမလုံလောက်ပါ။ ပျော်စရာသည်ဖက်ရှင်နှင့်မသင့်ပါ၊ ခြေအိတ်များသည်၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကောင်းသောအထည်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်စိတ်ကူးအနည်းငယ်ထည့်ရန်လိုသည်။ တကယ်တော့ Printful မှာသင်လုပ်နိုင်တယ် မူရင်းထုံးစံခြေအိတ်အများစုကိုဖန်တီးပါ. ဒါဟာခြေအိတ်တွေကိုသတိမပြုမိဖို့ဘဲ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အသွင်အပြင်အစစ်အမှန်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းဘဲ။
သူတို့မှာကြံအမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ် pinkies, anklets, ပုံမှန်နှင့်ရှည်သည်အခြားအရွယ်အစားများ၊ ၀ တ်ထားသည့်အ ၀ တ်၊ ဖိနပ်၊ သူတို့ပေးသောအသုံးပြုမှုနှင့်ငါတို့ရှိသည့်ရာသီပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုသုံးလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်းအကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်ရှိသည် ပြုပြင်ခြေအိတ်သည်ခြေဖဝါးနှင့်လိုက်ဖက်သောအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှည်လွန်းလျှင်ခေါက်မှုများရှိလိမ့်မည်။ တိုလွန်းလျှင်ခြေအိတ်သည်သင်၏ဖနောင့်အောက်တွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ ခြေအိတ်သည်သင့်ခြေထောက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖိနပ်နှင့် တွဲ၍ စမ်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခြေအိတ်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်သည့်အခါအရွယ်အစားတစ်ခုစီ၌အများအားဖြင့်ဖိနပ်အရွယ်အစားနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခြေအိတ်အသစ် ၀ ယ်တဲ့အခါအဲဒါကိုသတိပြုပါ ချုပ်ရိုးမရှိ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ချုပ်ရိုးတွေပြန့်နေတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပွတ်တိုက်မှုက chafing and blisters ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အလွန်ဆင်တူပုံရသော်လည်းခြေအိတ်များတွင်အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ချွေးအလွန်ထွက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသင်စဉ်းစားရမည် လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းပြီးစလစ်မကပ်နိုင်သောပစ္စည်း ၎င်းသည်ခြေဖဝါးကိုဖိနပ်အတွင်းသို့မရွေ့စေခြင်း၊ ခြေအိတ်၌စိမ်ခြင်းမှချွေးများထွက်ခြင်းမှမကောင်းသောအနံ့များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် synthetic ပိတ်ထည် ၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သောချည်နှင့်ယှဉ်လျှင်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ထို့ထက်ပို အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းရှိသည်၊ ခြေအိတ်၏သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ကိုနည်းနည်းပိုကုတ်တာနဲ့အဲဒါကပိုကြာရှည်တာပိုကောင်းတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆောင်းရာသီ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုထူ။ ပိုနွေးသောပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအရာများကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် သိုးမွေးသို့မဟုတ် cashmere
သင်မြင်သည့်အတိုင်းခြေအိတ်သည်ဤဆောင်းပါးကိုမဖတ်ခင်သင်တွေးထင်ထားသည်ထက်ပိုမိုသောအရည်အသွေးများစွာရှိသည်။ တစ်စုံအသစ်တစ်ခုမ ၀ ယ်မီ၎င်းတို့တစ် ဦး စီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ သင်အမှန်မှန်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » Calzado » အမျိုးသားများ၏ခြေအိတ်များတွင်အရေးအကြီးဆုံးလက္ခဏာများ